News Collection: भिडियो हेरेर कारवाही हुनुपर्छः ओली
भिडियो हेरेर कारवाही हुनुपर्छः ओली
काठमाडौं, मङ्सिर ४ (नागरिक)- एमालेका वरिष्ठ नेता केपी शर्मा ओलीले संसदमा भएको घटना बजेटको अवरोध मात्र नभइ लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि आक्रमण भएको बताएका छन्। युवा संघले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उनले संसदमा उपद्रो, गुण्डागर्दी मच्चाउनेलाई भिडियो हेरेर कारवाही गर्नुपर्ने माग गरे।
'उपद्रोकारी गुण्डागर्दी गर्नेलाई भिजवल हेरेर कारवाही गर्नुपर्छ', सभामुखतर्फ संकेत गर्दै ओलीले भने- 'निलम्बन गरिनुपर्छ। यसो गर्दा उनीहरु उफ्रिएलान्। तर अब कि लम्पसार पर्नुपर्छ कि उभिन सक्नुपर्छ त्यो बाहेक अर्को विकल्प छैन।' माओवादी उपाध्यक्षको नेतृत्वमा एक हुल युवालाई संसद बाहिर लगेर धार लगाएर ल्याइएको आरोप लगाउँदै उनले अर्थमन्त्री ब्रिफकेसमा पैसा छ भनेर लुटेको र पछि कागजात भेटेपछि फिर्ता गरिदिएको उल्लेख गरे।
संसदमा माओवादीले देखाएको व्यवहारले लोकतन्त्रको भविष्य र कानुनी राज्यको सम्बन्धमा गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको भनाइ थियो। 'उच्छृङ्खल सांसदले मात्र गरेका हैनन् उनीहरुलाई लगाइयो', ओलीले भने- 'हामी स्पष्ट हुनैपर्छ अब कसरी अघि बढ्ने ?'
माओवादीलाई यथास्थितिवादी भएको उल्लेख गर्दै उनले संसदमा अर्थमन्त्रीलाई कुटपिट गरी आतंक मच्चाउने शक्ति कम्युनिष्ट हुन नसक्ने जिकिर गरे। 'गुण्डागर्दी आतंक मच्चाउने कसरी कम्युनिष्ट हुन्छ ? सरकारलाई राजिनामा गराएर सरकार बनाउन नसक्ने कसरी क्रान्तिकारी हुनसक्छ ?'
माओवादीको विस्तारित बैठकलाई कुम्भमेलाको संज्ञा दिएका ओलीले सिंहदरबार घेरेर पार नलागेपछि पुरानो दरबार घेर्न गएको उल्लेख गरे। माओवादीले ठूलो पार्टीको धाक धक्कु लगाउने कुराको म्याद गुज्रिसकेको भन्दै उनले प्रमुख पार्टीको हैसियत माओवादीले जेठ १४ नै गुमाइसकेको बताए।
एकातिर सेना समायोजन भन्ने र अर्कोतर्फ पार्टीको बैठकमा लडाकू सहभागी गराउने माओवादी नीति त्रुटिपूर्ण भएको ओलीले बताए। सम्बोधनको अधिकांश समय माओवादीप्रति आक्रोसित देखिएका ओलीले बैठकमा सहभागी हुने लडाकूलाई राशनपानी बन्द गरिनुपर्ने उल्लेख गरे। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र महासचिव रामबहादुर थापा पनि लडाकू नै भएको उल्लेख गर्दै उनले भने-' उनीहरु राजनीतिक प्रक्रियामा आएका कारण उनीहरुको समायोजन र पुनर्स्थापना गर्नु परेन।'
माओवादीको सम्पूर्ण शक्ति लडाकू भएको उल्लेख गर्दै ओलीले भने- 'केटाकेटीको बल रुने कुरामा हुन्छ। माओवादीको बल चाहिँ लडाकूमा छ। त्यसैले भए भरकालाई लान खोजेका हुन्।'
माओवादी शिविरमा १९ हजार भन्ने तर्क वाइयात भएको भन्दै उनले शिविरमा १०-११ हजार रहेको र त्यसमध्ये धेरैलाई विस्तारित बैठकमा लगेपछि लडाकू होलान् त्यसमध्ये थुप्रैलाई लाने भनेका छन्।
युवा संघ एमालेको झुम्का, बुलाकी, लिपिष्टिक, पाउडर नभएको भन्दै ओलीले भने- 'यो एमालेको वर्गीय संगठन हो यो संघर्षको मैदानमा आएर जिउँदो जाग्दो हुनुपर्छ। तपाइँहरु मैदानमा उत्रनुहोस्।'